Covid-19 fonon-tànana azo ampiasaina medikaly mpanamboatra sy mpamatsy - China Covid-19 fonon-tànana azo ampiasaina ho an'ny mpitsabo
Fonon-tanana fanadinana nitrile azo ariana
Ny fonon-tanana Nitrile no taranaka farany fonon-tanana; vita amin'ny fingotra nitrile synthetic izy io. Raha ampitahaina amin'ny fonon-tanana vita amin'ny latex, dia manana endrika mihoatra ny fanoherana ny puncture, ny fidiran'ny anti-bakteria, ny porofo simika ary ny faharetany, manome fiarovana tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa. Amin'izao fotoana izao, ny fonon-tànana nitrile dia be mpampiasa amin'ny laboratoara lehibe rehetra, maso mpikaroka, hopitaly, tobim-pahasalamana, toeram-pidiovana ary toeram-pitsaboana ary nahazo fiderana avo lenta avy amin'ny mpampiasa.
Fonon-tanana mifangaro Nitrile / Vinyl mifangaro
LIFAN Disposable Synthetic Nitrile Vinyl / PVC Gloves Powder Free Mixed Material Blend Vinyl Nitrile Gloves, karazana fonon-tànana synthetic vaovao izay novolavolaina mifototra amin'ny teknolojia famokarana fonon-tanana. Ny akora misy azy dia mifangaro amin'ny paty PVC sy latina Nitrile, noho izany ny tombony vita dia manana tombony amin'ny fonon-tànana PVC sy nitrile. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana ara-pitsaboana, fitsaboana nify, vonjy taitra, fitsaboana, zaridaina, fanadiovana sns Nontoxic, tsy manimba ary tsy misy fofona. Fonon-tanana azo ampiasaina ny vokatra.
Fonon-tanana Vinyl / PVC azo ampiasaina
Ny fonon-tànana fanadinana LIFAN azo ampiasaina Vinyl / PVC vita amin'ny polyvinyl chloride izay be mpampiasa amin'ny fanadinana sy fitsaboana, fikarakarana sakafo, indostrian'ny elektronika ary fitaovana, fanandramana simika, fanapahana volo, indostrian'ny fanontana ary fandokoana sns.